Tahriibayaal ku Dhintey Badda Mediterranean Meel ku Dhow Xeebta Dalka Libya – STAR FM SOMALIA
Ugu yaraan afartan tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday koofurta badda Mediterraneanka kadib markii doon ay ka soo raaceen xeebaha dalka Libya.
Ciidamada badda dalka Talyaaniga ayaa sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii ay ku soo badbaadin lahaayeen dadka kale ee saaran doonta.
Doontan oo ay saarnaayeen illaa afar boqol oo ruux ayaa loo malaynayay in ay degtey hase yeeshee afhayeen u hadlay ciidamada badda Talyaaniga Costantino Fantasia ayaa sheegay in aysan doontu degin balse dadka dhintey ay ahaayeen kuwo ka dhacay kadib markii ay doontu ku sigatay in ay degto.
Afhayeenka ayaa sidoo kale waxa kale oo uu intaa ku daray in ay illaa iyo haatan ay soo badbaadiyeen dad gaaraya saddex boqol oo ruux. Wakaalada wararka dalka Talyaaniga ee ANSA ayaa sheegtay in doonta marka ay arkeen ciidamada badda Talyaaniga ay joogtay meel u jirta 33km. Badda Mediterraneanka ayaa noqotay halka ugu qatarsan ee la isaga kala gudbaan dadka tahriibayaasha ah.
Talaadadii aynu ka soo gudubnay ayaa dad gaaraya konton ruux lagu waayay kadib markii ay la dagtay doon cinjir ah ay saarnaayeen ay kula dagtay badda Mediterraneanka, halka laga soo badbaadiyay dad gaaraya 2,000 oo soo galooti ah.
Horaantii bishan ayaa la rumeysan yahay in dad gaaraya labo boqol oo tahriibayaal ay ku dhinteen xeebaha Libya kadib markii ay degtey doontii ay saarnaayeen.
Dalka Talyaaniga ayaa ah mid kamid ah wadamada ay dadka tahriibayaasha ah ay ka galaan qaarada Yurub iyagoo raadinaya nolol wanaagsan, waxaana gaaray dalka Talyaaniga inka badan 85,000 oo ah soo galooti ka tegey wadamo ku yaal qaarada Afrika iyo Bariga Dhexe.
Hase ahaatee Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay in dad gaaraya 1,900 oo ruux ay ku dhinteen xeebaha Talyaaniga tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan.